Profile Aluminum Waayo hoggaamiyo Strip Light Oo hoggaamiyo Light Bar - Shiinaha DongGuan JinRong Aliminum Products
Maxaad inoo dooro
Profiles Aluminum (OEM / Machining)
Profiles Slot Warshadaha
Profiles Industrial Non-Standard
Heat u tiimban
Aluminum Qaybo qayilo
Aluminum Ku marooji
Qaybo ka Aluminum Gurdanka
LED Profiles qaybta Tube
Qaybo ka Aluminum Small
About MOQ ah
About Samaynta Muunado ah
About Place Amarka
About Qaybo OEM Aluminum
About Service Machining ah
About kontoroolka Tayada waxay la
About Xidhmada Aluminum ah
About Shipping ah
Profile Aluminum Waayo hoggaamiyo Strip Light Oo hoggaamiyo Light Bar
Product Name: LED Profiles qaybta Tube
Category: LED Profiles Aluminum Tube
Waxyaabaha: 6063-T5, 6061-T6, 7075 ....
Xirxirida: kartoonka, plywood sariirtaada iwm (raaca codsiga macaamiisha ee in ay alaabahooda)
Color: silvery, White, Black (midab kasta waa laga heli karaa sida aad u baahan tahay)
MOQ: 1 ton ka dib xaqiijiyay in tijaabada
Erayada furaha u Product: Alaab-qeybiye ah Extruded Aluminum Extrusion Profiles, sax Extruded Aluminum Extrusion Profiles, Extruded Aluminum Extrusion Profiles saaraha
Isticmaalka: looxyada Window iyo albaabka, Dhisidda derbiyada galaas, mab guddi Solar, sii kordhaya Solar / dhxe saqafka, saxanka Heat, Warshadaha khadadka shirka qalabka, nalalka LED
1). OEM Service / Customize Aluminum Profiles
2). Design / Xidhmada aluminium sida macaamiisha codsi
3). Color kasta oo diyaar u ah aluminium
4). Bixi machining sida goynta, feedh, qodista, iwm iyo-iib aheyn ka dib adeegyada
Previous: Hogaaminayo Profile hiitarka Aluminum hoggaamiyo Light, hoggaamiyo Aluminum Extrusions
Next: Shenzhen Aluminum CNC Machining saaraha
Waxaan ku siin adeegga / Habayn OEM for profiles aluminium, sida saxanka kulaylka, qayb ka jediyay, tube aluminium ay hogaaminayaan, profiles non-warshadaha caadiga ah iwm Marka hore, waxaad ka fiirsan doonaa in la sameeyo tijaabada, waxaad siin kartaa sawiro ama Dakatu noo falanqayn. Sidoo kale aad saamiga aad ku samaysay noo ah in la ogaado in aad codsi u diro. Adiga kaliya ayaa loo xaqiijiyo gaaridda tijaabada, waxaan sii wadi galay wax soo saarka mass waxaad codsan kartaa.
Fadlan la soco in adeegga / Habayn OEM aan bixino si aad u doorato:
1.OEM profiles aluminium aad codsan
2.we siin karaan daaweynta anodizing oo dusha
3.we dalab machining tayada ama shaqo processing at qiimaha la awoodi karo, sida goynta, feedh, jediyay, qodista, iwm
midabka 4.Any loo heli karaa wax aluminium
5.Design/package qaybo aluminium sida codsiga macaamiisha ah ee
S: Ma waxaad tahay warshad ama shirkad ganacsi ah? Oo waxaa ii sheeg adeegga?
A: Waxaan nahay warshad ayaa ku takhasustay soo saarka processing aluminium muddo ka badan 10 sano, sida wax warshadaha aan caadiga ahayn, aluminium jediyay qaybo, qayilo aluminium, saxanka kulaylka, fur aluminium iwm
S: Waa maxay faa'iidooyinka iyo si aad nidaamka? Ma jiraa MOQ kasta oo loo baahan yahay?
A: Waxan u fidinaa adeega OEM falanqeeyo aluminium qiimo warshad in tayada ugu fiican. habka amarka waa in aad sawir ka ah noogu soo diraan, oo aan falanqayn aad sawir iyo quote inaad ku salaysan MOQ aad looga baahan doono. (No MOQ loo baahan yahay, laakiin qiimaha for tiro yar oo noqon lahayd ka badan tirada weyn)
S: Waa sidee damaanad ee tayada badeecada?
A: Waxaan qaban u adkeeyo tayada gacanta ka aad u bilaabeen in ay dhamaadka iyo in ujeedkiisu yahay 100% baadi free. Waxaad u baahan kartaa adeegga macaamiisha-iib aheyn ka dib haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo. amar kasta waa in la soo maray iyada oo waaxda QC hortooda maraakiibta.
S: Ma waxaad baarka? waa lacag la'aan ama dheeri ah?
A: Haa, waxaan soo bandhigi kartaa tijaabada lacag oo lacag la'aan ah, laakiin aadan bixin qiimaha xamuulka, iyo ujeedada baarka kuugu soo diray kuwa hubinta our alaabta tayada iyo nidaamka technology.
S: Sidee ayay noqon kartaa habka haddii aan u baahdo dhigi noocooda ah?
A: Haddii aad qabto sawiro ama shaybaarka, fadlan si xor ah inay noo soo diraan, oo noo sheeg shuruudaha gaarka ah sida wax, dulqaad, daaweyn dusha iyo inta aad u baahan tahay.
S: Sidee ayaad markab badeecada? Sidee dheer waa markii dhalmada aad?
A: Sida for qaadashada tijaabada, guud ahaan waxa ay ku saabsan 5 ~ 10 maalmood, laakiin waxaa la sida ay tirada iyo waxyaabaha complicated.We iyaga markab laga yaabaa by oogeen, EMS iwm Sida ee si weyn in ay soo saaraan alaabta, waxaan iyaga markab doonaa by FOB, waqtiga dhalmada waxay ku salaysan tahay dalka aad jeclaan lahayd in markab, laakiin maalmaha qiyaas ku saabsan yahay 25 maalmood.
S: Halkee waxa uu ku yaalaa aad warshad? Sidee i waxa ay booqan kartaa?
A: Shirkadda Our waxa uu ku yaalaa Jiji Industrial zone, Shanghe Village, Wangniudun Town, Dongguan City, oo taasuna waa magaaladii ugu dhow ka Shenzhen, Guangzhou, Hijmans.
Qofka lala xiriiri karo : Kelly Cheng
Title Job : Maareeyaha Sales
Address Factory : Jiji Road Warshadaha, Shanghe Village, Wangniudun Town, Donguan City, Gobolka Guangdong, Shiinaha
Aluminum 80mm Profile ay hogaaminayaan, 90mm
Profile Aluminum Waayo qeybiye hoggaamiyo Siraaj
Aluminum Extrusion Profiles Wixii hoggaamiyo Strip Al mg ...
36w hoggaamiyo Street Light Aluminum Heat dego Waayo hoggaamiyo ...
Hogaaminayo Profile Aluminum Waayo hoggaamiyo Strip Oo hoggaamiyo Dis ...
Hogaaminayo Profile hiitarka Aluminum hoggaamiyo Light, hoggaamiyo Al ...
Jiji Industrial Road, Shanghe Village, Wangniudun Town, Donguan City, Gobolka Guangdong, Shiinaha
Hadda na soo wac: 0086 13713047317